Collage Instagram Amabali, Fumanisa ngoku! Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Amabali e-Instagram Collage, fumana ngoku!
NgoJanuwari 10, 2019 0 IiCententarios 1283
Amabali e-Instagram asisixhobo esisebenzayo. Ezi, vumela ukuba wabelane ngeefoto kunye nevidiyo yemicimbi yemihla ngemihla yomsebenzisi; ngesimo sokunyamalala emva kwethuba leeyure ze-24. Ngenxa yale ndawo isebenzayo eqongeni umsebenzisi unokuthumela yonke into eyenziwe ngexesha lasemini, ngaphandle kokufaka umthwalo omkhulu iprofayile yakho Ukongeza, inethiwekhi yoluntu edumileyo ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso ukushicilela ngeempembelelo, imizobo, izitikha kunye nolunye uluhlu lwezixhobo ezongezelelweyo. Kungenxa yoko le nto ibango liphezulu lokusetyenziswa yi abasebenzisiOku kuyinkuthazo yeenkqubo. Ke ngoko, uluhlu lwe usetyenziso kunye nezandiso evumela ukuba stylise ukupapashwa kunye nokufezekisa i-Instagram ibali Collage.
Uyenza njani i-Instagram ibali Collage?
Ukuze wenze i-collage ye-Instagram yamaBali, umsebenzisi kufuneka akhuphe kwaye afake i izicelo ezicetyiswayo. Ngale ndlela umsebenzisi uya kuba nakho ukufezekisa iinjongo ezinqwenelekayo. Ngale nto, shicilela uyilo lokuqala kunye nomxholo wesandla. Ukusetyenziswa kwesicelo esongezelelweyo akunakuphepheka, kodwa ngale ndlela amathuba okuphumelela aphakanyisiwe.
Uhlelo lokusebenza Ubeko Iveliswe liqonga le-Instagram, elizimeleyo nelivumela ubuchule bokukhula ngokupheleleyo. Yongezwe koku, yenza lula amanyathelo okudala i-Instagram ibali Collage. Kuya kuza kugcwele imilo kwaye Iitemplate ezimiselwe kwangaphambilis apho kuphela umfanekiso oyifunayo. Ukongeza, isebenza ngokukhawuleza xa ukhetha iifoto ezifanelekileyo, ngoko iya kubonisa uyilo olunokwenzeka ngokuxhomekeke Inani lemifanekiso. Ifumaneka kuzo zonke iisistim ezisebenzayo, kwaye inokufumaneka kwiivenkile ezisetyenziswayo.
Xa uvula iqonga Instagram kwaye uchonge, umsebenzisi kufuneka aye kwikhamera. Nje ukuba ungene kuwo, uya kukhetha uluhlu lweefoto okanye ithala leencwadi, ukuze livele phambi komsebenzisi iifoto zamva nje kwaye ekugqibeleni kwelinye icala uphawu lwesakhiwo. Ngokucofa kuyo, umsebenzisi uya kubuzwa ukuba uyafuna na ukuyikhuphela. Nje ukuba uyiqinisekisile loo nto ufuna ukukhuphela Isicelo sizakubhekiswa kwesinye isitolo esihambelana nenkqubo yakho yokusebenza. Sele ivenkile, inkcazo yesicelo, umsebenzi, ubunzima, kunye nezinye ziya kubonakala. Emva kokuzifunda, umsebenzisi kufuneka azikhuphele. Ukuze ukwazi faka ngokuzenzekelayo Insiza ekwisixhobo.
Emva kokukhuphela usetyenziso, kufuneka uyivule. Kwaye ngale ndlela, inkcazo emfutshane iya kuziswa kumsebenzisi isifundo esichazayo malunga nendlela yokuSebenzisa kwaye ziyintoni iziphumo. Ukugqiba isifundo, umsebenzisi kufuneka askrole ukusuka ekunene ukuya ekhohlo de kugqitywe. Nje ukuba inkcazo igqityiwe, umntu lowo unokuqhubeka kunye nenjongo yakhe ye-collage Instagram Stories. Ukwenza oku, kufuneka uvumele kwakhona isicelo ukufikelela kwigalari okanye ithala leencwadi, ukuze khupha iifoto ukusebenzisa
Yenza amabali e-Instagram collage
Ukulungiselela oku, umsebenzisi kufuneka akhethe iifoto ezifanelekileyo kwiqonga lesicelo. Njengoko ukhetha iifoto, ubeko luzakubonisa uyilo olunokubakho ngenani lemifanekiso. Nje ukuba ukhethe iifoto, usetyenziso lubonelela ngezixhobo ze Guqula imifanekiso zombini ubungakanani, isikhundla kunye nabanye.
Nje ukuba umsebenzisi sele ekhethile itemplate yokuyisebenzisa kunye nokuzenza ongezelelweyo zonke iifoto, kunye nokusebenzisa izixhobo azithandayo ukuphucula uyilo. Iya kuba yimfuneko, gcina umfanekiso kwilayibrari yakho kwaye ukwazi ukuyikhuphela ngaphandle kwisicelo se-Instagram; eya kuthi ke kwabelwane ngayo njenge-collage ye-Instagram Stories.
Emva kokugcina umfanekiso, kufuneka ungene kwiqonga le-Instagram. Emva koko, yiya kwibha yebali kwaye ucofe iibhaluni zomsebenzisi (Ngelixa unophawu +). Ngaphandle koko, ungaswayipha uye ekunene Imbali entsha, kuba ulapho, kufuneka ukrole phezulu. Ke ukuba ngale ndlela, yonke imifanekiso yakutshanje kunye neefoto ziyavela ukuze ukhethe ikhowudi yamaBali ye-Instagram eyenziwe. Emva koko, kuya kufuneka ucinezele Thumela kwaye uqinisekise isithuba esijolise kwimbali yayo. Ngale ndlela, ukugqibile ukulayisha ikholaji yamabali e-Instagram oyifunayo.
Jonga indlela yandisa abalandeli bakho kwi-Instagram.
Iindlela ezizezinye kunye nokusetyenziswa
Abasebenzisi beqonga babonise umdla omkhulu wokubuya uyilo ngakumbi Amabali akho Kuninzi kakhulu, kangangokuba bathathe iimpapasho bazibeka kwinqanaba eliphezulu leengcinga, ezinjenge-Instagram Amabali e-collage, i-typefaces, micros kunye nabanye. Ukwenza amabali ngokwezifiso kwaye wenze upapasho olukhethekileyo nolungalibalekiyo, ezinye izicelo ziyacetyiswa. Oku kuyakuvumela umntu ngamnye ukuba enze i-collage ye-Instagram yeeNdaba, kunye nolunye uluhlu lweendlela zokubuya ngokwahlukileyo kwaye ndinobuchule iposti yakho Ezinye zezinto ezinokuthi zenziwe kukuBeka ngokuBekekileyo
Ngale qonga, umsebenzisi unokusebenzisa ikhompyuter okanye iwebhusayithi yeselula ukuyila i-collage yama-Instagram yeeNdaba. Kwaye ayisiyiyo kuphela iphepha elikuvumela ukuba uhlele amabali, kodwa kunye nokuzisa amathuba angenasiphelo. Ukusuka kwizithuba ezilula kunye nezincinci, ukuya kupapasho olulodwa nolukhulu. Umsebenzisi kufuneka kuphela kwiwebhusayithi esemthethweni yeCanva kwaye ngaloo ndlela abe nokufikelela kwindalo yokudala.
Iqonga elifanayo line apk ye zixhobo. Yiyo loo nto ukuphucula amava ngexesha lokusebenzisa kunye nokwenza lula uyilo kunye nokudalwa kwe-collage ye-Instagram Amanqaku. Esi sicelo sikhona kwi-iOS, i-Android, kunye nezinye. Ke ukwamkelwa kwayo kubanzi kwaye kucetyiswa kakhulu. Ukongeza, kwinqanaba lokushishina, esi sixhobo siza kuvumela ukuba ne bhetele phuhliso wentengiso kunye noyilo abaluphathayo, ezifana ne-Instagram ibali Collage.
Isicelo silungele ukwenza umdla wamabali e-Instagram amabali. Izisa ngeendlela ezahlukeneyo, kwaye iyafumaneka kwinkqubo yokusebenza ye-iOS. Lolu hlelo lokusebenza Isimahla kwaye ilula ukuyisebenzisa. Inefomathi ezahlukeneyo ezinokuhlelwa kwaye zihlengahlengiswe ngokobungakanani be collage efanelekileyo yamabali e-Instagram. Ukuba umsebenzisi ufuna ukufumana usetyenziso, banokukhangela i-AppStore yesixhobo sabo esiphathwayo.
Isicelo sokuhlela esihle kakhulu ilula kwaye ikhululekile. Esi sicelo siza kunye nezixhobo ezinjengeephalethi zemibala kunye neziphakamiso, ukuhlela ubungakanani beefoto kunye nenketho efunekayo yokwenza i-Instagram ibali Collage. Le app yasimahla iya kumqinisekisa umsebenzisi ukuba athumele iimpapasho njengabachwephesha nangaphandle kokuba abazi iindlela. Ukususela kwimo yayo kunye Ulungelelwaniso Yenza ukuqonda kube lula kakhulu ekusebenziseni kwayo kamva.
1 Uyenza njani i-Instagram ibali Collage?
1.1 Khuphela ubeko
1.2 Vula usetyenziso
1.3 Yenza amabali e-Instagram collage
2 Iindlela ezizezinye kunye nokusetyenziswa
NgoJanuwari 10, 2019
Guqula iphasiwedi Instagram Super lula!
Ungayifaka njani imveliso kwi-Instagram